हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय समाचार प्रेस खेलहरु चेकआउट मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि बनाम मित्र घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
जब स्टेरोइड्सको कुरा आउँछ, हाइड्रोकार्टिसोन र कोर्टिसोन दुई विकल्पहरू हुन् जुन तपाईंको डाक्टरले सिफारिस गर्न सक्छ। हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोन हल्का कोर्टिकोस्टेरोइड हो जुन मुख्यतया छालाको अवस्था, रुमेटिक रोग र एड्रेनल डिसआर्डरको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
हाइड्रोकार्टिसोन र कोर्टिसोन मानव निर्मित कोर्टिकोस्टेरोइड एजेन्ट हुन् जसले शरीरमा प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने स्टेरॉइड हार्मोनको प्रभावहरूको नक्कल गर्दछ। एड्रेनल ग्रंथि द्वारा उत्पादित स्टेरोइड हार्मोनहरू मिनरलकोर्टिकॉइड (एल्डोस्टेरोन) हुन्, जसले तरल पदार्थ प्रतिधारणमा भूमिका निभाउँछ, र ग्लुकोकोर्टिकॉइड (कोर्टिसोल), जसमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी प्रभावहरू हुन्छन्।
उनीहरू कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरामा तिनीहरूको समानताहरूको बाबजुद, हाइड्रोकार्टिसोन र कोर्टिसोनको शक्ति, सूत्र र उपयोगमा भिन्नता छ।
हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोन बीचमा मुख्य भिन्नता के हुन्?
हाइड्रोकार्टिसोन (हाइड्रोकोर्टिसोन के हो?)एक सामान्य corticosteroid हो जुन ओभर-द-काउन्टर (OTC) वा प्रिस्क्रिप्शनको साथ उपलब्ध छ। हाइड्रोकार्टिसोनको ब्रान्ड नामहरूमा कर्टेफ, कर्टिजोन, एनकोर्ट-एचसी, र तयारी एच। हाइड्रोकार्टिसोन मौखिक ट्याबलेट, सामयिक क्रीम, सामयिक लोशन, र सामयिक मलहमको रूपमा उपलब्ध छन्। यो गुदाशय सपोसिटरीको रूपमा पनि आउँदछ।
कोर्टिसोन(Cortisone के हो?) एक जेनेरिक कोर्टिकोस्टेरोइड हो जुन केवल एक प्रिस्क्रिप्शनसँग उपलब्ध हुन्छ। Cortisone एक मौखिक ट्याब्लेट को रूप मा लिइएको छ र कहिलेकाँही यसको ब्रान्ड नाम, Cortone द्वारा चिनिन्छ। हाइड्रोकार्टिसोनको तुलनामा, कोर्टिसोन कम शक्तिशाली छ। यो किनभने cortisone आफैँ निष्क्रिय छ। यो प्रशासित भएपछि, कोर्टिसोन कलेजोमा हाइड्रोकोर्टिसोन, वा कोर्टिसोलमा रूपान्तरण हुन्छ।
हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोन बिचको मुख्य भिन्नता
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड र जेनेरिक उपलब्ध सामान्य उपलब्ध (ब्रान्ड नाम बन्द)
ब्रान्ड नाम के हो? कर्टेफ, हाइड्रोकोर्ट, कर्टिजोन, अला-कोर्ट, एनकोर्ट-एचसी, तयारी एच Cortone
रेक्टल क्रीम मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? मौखिक खुराक: २० देखि २ to० मिलीग्राम प्रति दिन, उपचार गरिरहेको अवस्था र औषधिमा व्यक्तिको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दै
सामयिक: प्रभावित क्षेत्रमा प्रति दिन २ देखि area पटक लागू गर्नुहोस् मौखिक खुराक: day 35 देखि 35०० मिलिग्राम प्रति दिन, उपचार गरिरहेको अवस्था र औषधिमा व्यक्तिको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दै
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? अवधि उपचार भइरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ, तरOTC सामयिक प्रयोग7दिन भन्दा बढि छ अवधि उपचार भइरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र २ बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरू वयस्कहरू
शर्तहरू हाइड्रोकोर्टिसोन बनाम कोर्टिसोन द्वारा उपचार
दुबै हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोन विभिन्न अवस्थाबाट सूजन उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी कोर्टिकोस्टेरोइडले एलर्जीको अवस्था, श्वासप्रश्वासको अवस्था, जठरांत्र रोग, एड्रेनल ग्रंथि बिरामी र गठिया सम्बन्धी अवस्थाहरूबाट जलनको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ। किनकि स्टेरोइड्स अक्सर प्रक्षोभक लक्षणहरू लक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरू अन्य औषधिहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन समस्याको स्रोतलाई व्यवहार गर्दछ।
सामयिक हाइड्रोकोर्टिसोन एफडीएलाई एलर्जी प्रतिक्रियाबाट संपर्क डर्मेटिटिस वा छालाको जलनको उपचार गर्न अनुमोदित हुन्छ। हाइड्रोकार्टिसोन सम्पर्कमा आए पछि छालाको जलन र खुजली लक्षणहरूको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ विष आइभी वा विष ओक। जो को लागी खराब प्रतिक्रिया अनुभव किराको टोकाइ , हाइड्रोकार्टिसोन जस्तो सामयिक कोर्टिकोस्टेरोइड्सले खुजली र सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ।
सर्त हाइड्रोकोर्टिसोन कोर्टिसोन
छाला विकार (सम्पर्क dermatitis, atopic dermatitis) हो हो
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवस्था (अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन रोग) हो हो
गठिया अवस्था (गठिया, लुपस) हो हो
एड्रेनल ग्रंथि विकार (एड्रेनल अपर्याप्तता वा एडिसन रोग) हो हो
ओन्कोलोगिक रोग (हजकिन लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्युकेमिया) हो हो
श्वसन अवस्था (निमोनिया) हो हो
अन्य ज्वलनशील अवस्था (एलर्जी प्रतिक्रिया, दम बढ्ने) हो हो
के हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन अधिक प्रभावकारी छ?
हाइड्रोकार्टिसोन कोर्टिसोन भन्दा अलि बढी शक्तिशाली छ। खुराक तुलना गर्दा, १.२25 मिलीग्राम कोर्टिसोन हाइड्रोकार्टिसोनको १ मिलीग्राम बराबर हुन्छ। Cortisone सक्रिय हुँदैन जबसम्म यो कलेजोमा प्रोसेसिंगको माध्यमबाट हाइड्रोकार्टिसोन हुँदैन। किनकि कोर्टिसोन अनिवार्य रूपमा हाइड्रोकोर्टिसोन हो, तर यसलाई सक्रिय बनाउनको लागि अतिरिक्त चरणको आवश्यक पर्दछ, यो प्राय जसो सिफारिस गरिएको हुँदैन।
एक कान संक्रमण संग कसरी व्यवहार गर्ने
हाल, कुनै क्लिनिकल परीक्षणहरू छैनन् जुन विशेष अवस्थाको लागि सीधै हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोनको तुलना गर्दछ। जस्तै अन्य कोर्टिकोस्टेरोइड्सको तुलनामा प्रेडनिसोन र triamcinolone , hydrocortisone र cortisone कोमल र छोटो अभिनय हो। अन्य सामयिक कोर्टिकोस्टेरोइडको तुलनामा, सामयिक हाइड्रोकोर्टिसोनलाईaमानिन्छ कम शक्ति कोर्टिकोस्टेरोइड।
ओटीसी हाइड्रोकोर्टिसोन खरीद गर्नु अघि चिकित्सा सल्लाहको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिन सिफारिस गरिन्छ। अन्यथा, हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन ट्याब्लेटहरूको लागि प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्न डाक्टरलाई भेट्नु आवश्यक छ।
कभरेज र लागत तुलना हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोनको
हाइड्रोकोर्टिसोनको जेनेरिक संस्करणहरू मेडिकेयर र अन्य बीमा योजनाहरू द्वारा प्राय: ढाकिएका हुन्छन्। हाइड्रोकार्टिसोन पनि अधिक काउन्टर फेला पार्न सकिन्छ ताकि यसले केही योजनाहरूको कभरेजलाई असर गर्न सक्छ। हाइड्रोकार्टिसोन क्रीमको एक ट्यूब $ 30 सम्म चलाउन सक्छ। यदि तपाईंसँग एक डाक्टरको पर्ची छ र एक छुट कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै एकलकेयर कार्ड , hydrocortisone $ than भन्दा कम खर्च गर्न सक्दछ।
Cortisone ट्याब्लेटहरू मात्र वैध डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सनबाट किन्न सकिन्छ। धेरै मेडिकेयर र बीमा योजना जेनेरिक कोर्टिसोन लाई कभर गर्दछ। कोर्टिसोनको औसत खुद्रा लागत $ १०२ सम्ममा उच्च हुन सक्छ। तपाईं पनि एक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एकलकेयर कोर्टिसोन कुपन tablets० ट्याब्लेटको मात्राको लागि $ around। तिर्न
मानक खुराक २० देखि २0० मिलीग्राम प्रति दिन अलग खुराकमा विभाजित प्रति दिन २ to देखि mg०० मिलिग्राम छुट्टै खुराकमा विभाजित
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे । 1– $5। 1– $ 90
एकलकेयर लागत + + + $$ +
हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोनको साझा साइड इफेक्टहरू
हाइड्रोकार्टिसोन र कोर्टिसोन, अन्य कोर्टिकोस्टेरोइड्स जस्तै, यस्तै साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोनको सामान्य साइड इफेक्टहरूमा टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, पसिना बढाउने, र छालाको फ्लशिंग समावेश छ। अन्य साइड इफेक्टमा बिरामी घाउ निको हुन, मांसपेशि कमजोरी, र उच्च रक्तचाप समावेश हुन सक्छ। कोर्टिकोस्टेरोइडको प्रयोगले सोडियम र फ्लुइड रिटेन्सन पनि लिन सक्छ जुन वजनको रूपमा देखा पर्न सक्छ।
कोर्टिकोस्टेरोइडको गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा एलर्जी प्रतिक्रिया वा एनाफिलाक्सिस समावेश छ। साइड इफेक्टको जोखिम डोज र उपचारको अवधिसँग सम्बन्धित छ। यस कारणका लागि, हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोन दीर्घकालीन उपयोगको लागि सिफारिश गरिदैन। लामो अवधिको लागि प्रयोग गर्दा, कोर्टिकोस्टेरोइडले यसको जोखिम बढाउन सक्छ अस्थिरोग , वा हड्डी हराउने, र एड्रेनल ग्रंथि मा अनियमितता।
छाला फ्लशिंग हो * हो *
बिरामी घाउ निको पार्ने हो * हो *
मांसपेशी कमजोरी हो * हो *
उच्च रक्तचाप हो * हो *
सोडियम र तरल पदार्थ प्रतिधारण हो * हो *
रगतमा चिनी बढेको हो * हो *
स्रोत: डेलीमेड ( हाइड्रोकोर्टिसोन ), डेलीमेड ( कोर्टिसोन )
हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोनको ड्रग अन्तर्क्रिया
हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोन कलेजोमा CYP3A4 एन्जाइम द्वारा प्रशोधन गरिन्छ। ड्रग्स जसले ब्लक गर्दछ, वा अवरोध गर्दछ, यो इन्जाइमले हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन स्तर बढाउन र साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ। उस्तै टोकन द्वारा, औषधिहरू उत्तेजित हुन्छन्, वा प्रेरणा दिन्छन्, यो इन्जाइमले हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन स्तर घटाउन सक्छ र उनीहरूको समग्र प्रभावकारिता कम गर्दछ।
हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोनले CYP3A4 इनहिबिटरहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छ जस्तै एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिड, र केटोकोनाजोल। हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोनले CYP3A4 inducers जस्तै रिफाम्पिन, कार्बामाजेपाइन, र फेनोबारबिटलसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ।
किनकि कोर्टिकोस्टेरोइडले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ, लिदै गर्दा डोजिंग समायोजित हुन आवश्यक पर्दछ एन्टिडाएबेटिक ड्रग्स । कोर्टिकोस्टेरोइडले एस्पिरिन र एन्टिकोआगुलन्टहरू जस्तै वारफेरिनको रगतको स्तरलाई पनि असर गर्न सक्छ।
Corticosteroids प्रतिरक्षा प्रणाली दमन गर्न सक्छन्। त्यसकारण, कोर्टिकोस्टेरोइड लिने बित्तिकै खोपहरू जोगिनु पर्छ किनभने संक्रमणको बढ्दो जोखिमको कारण।
तपाइँ एकै समयमा ibuprofen र tylenol दिन सक्नुहुन्छ
औषधि ड्रग क्लास हाइड्रोकोर्टिसोन कोर्टिसोन
एस्पिरिन एन्टिपलेटलेट / सालिसिलेट हो हो
रोजिग्लिटाजोन एन्टिडायबेटिक हो हो
प्रत्यक्ष इन्फ्लूएन्जा खोप
MMR खोप प्रत्यक्ष खोप हो हो
हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोनको चेतावनी
लामो समयको लागि कोर्टिकोस्टेरोइडमा रहनुले एड्रेनल ग्रंथि आफैंमा स्टेरोइड हर्मोनहरू उत्पादन गर्न सक्षम भएको राम्रोसँग असर गर्न सक्छ। यसले माध्यमिक अधिवृक्क अपर्याप्तता निम्त्याउन सक्छ, जुन थेरापीको अकस्मात बिच्छेदन पछि सामान्य हो। त्यसकारण, सम्भावित फिर्ती नहुनको लागि कोर्टिकोस्टेरोइडसँगको उपचार बिस्तारै ट्यापर गर्नुपर्दछ।
म neosporin को ठाउँ मा के प्रयोग गर्न सक्छु
Corticosteroids सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ यदि तपाईलाई कलेजो क्षति (सिरोसिस) वा एक अण्डरेटिभ थायरॉइड ( हाइपोथायरायडिज्म )।
Corticosteroids बच्चाहरु मा विकास र विकास दमन गर्न सक्छन्। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, बच्चाहरूमा हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोनबाट अलग रहनु पर्छ। केहि केसहरूमा बच्चाहरूलाई नियन्त्रणको मात्रामा कोर्टिकोस्टेरोइड्स लगाउन सकिन्छ।
कोर्टिकोस्टेरोइड्सको प्रयोगले संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ। कोर्टिकोस्टेरोइड्सले इम्युनोसप्रेसन्ट्सको रूपमा काम गर्न सक्छ, जसले संक्रमणको विरूद्ध लड्ने तपाईंको शरीरको क्षमता कम गर्न सक्छ।
हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन लिदा अन्य सावधानीहरूको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
हाइड्रोकार्टिसोन बनाम कोर्टिसोनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
हाइड्रोकोर्टिसोन भनेको के हो?
हाइड्रोकोर्टिसोन एक कोर्टिकोस्टेरोइड हो जुन विभिन्न गठियाहरू जस्तै गठिया, दम , र अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाइड्रोकोर्टिसोन मौखिक र सामयिक रूपहरूमा उपलब्ध छ। सामयिक हाइड्रोकोर्टिसोन सम्पर्क डर्मेटाइटिस र अन्य भौंला छाला रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। हाइड्रोकार्टिसोनको ब्रान्ड नामहरूमा कर्टेफ र हाइड्रोकोर्ट समावेश छ।
कोर्टिसोन भनेको के हो?
कोर्टिसोन एक कोर्टिकोस्टेरोइड हो जो विभिन्न अवस्थाबाट देखा पर्ने सूजन लक्षणहरूको उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो Cortone ब्रान्ड द्वारा पनि चिनिन्छ, जुन बन्द गरिएको छ। कोर्टिसोन २ mg मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ जुन सामान्यतया उपचारका लागि सर्तको आधारमा प्रति दिन धेरै दिनहरूमा धेरै पटक लिन्छ।
के हाइड्रोकोर्टिसोन र कोर्टिसोन समान छन्?
हाइड्रोकार्टिसोन र कोर्टिसोन समान लघु अभिनय कोर्टिकोस्टेरोइड हो। जे होस्, ती उस्तै छैनन्। कोर्टिसोन एक निष्क्रिय प्रोड्रग हो जुन कलेजोमा हाइड्रोकोर्टिसोन, वा कोर्टिसोलमा रूपान्तरण हुन्छ। हाइड्रोकोर्टिसोन सामयिक औषधीको रूपमा काम गर्दछ जबकि कोर्टिसोन सामयिक उपचार जत्तिकै प्रभावकारी हुँदैन।
के हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन राम्रो छ?
हाइड्रोकार्टिसोन कोर्टिसोन भन्दा बढी सामर्थ्यवान छ (१ मिलीग्राम हाइड्रोकार्टिसोन १.२25 मिलिग्राम कोर्टिसोनको बराबर हो)। हाइड्रोकार्टिसोन एक सामयिक क्रीम, लोशन, वा मलहिन को रूप मा over-the-काउन्टर उपलब्ध छ छालाको अवस्था । तपाईंको चिकित्सकले हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन तपाईंको अवस्थाको पूर्ण मूल्या after्कन पछि निर्धारित गर्न सक्दछ।
के म गर्भवती भएको बेलामा हाइड्रोकोर्टिसोन वा कोर्टिसोन प्रयोग गर्न सक्छु?
कम-खुराक कोर्टीकोस्टेरोइड कहिलेकाँहि गर्भावस्थाको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि उनीहरूको साइड इफेक्टको जोखिमको कारण, जस्तै उच्च रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्रा बढेको, र तरल पदार्थ प्रतिधारण, कोर्टिकोस्टेरोइडहरू मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि लाभहरू जोखिमहरू भन्दा बढी भए। गर्भावस्थामा कोर्टिकोस्टेरोइड्सको सुरक्षामा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म हाइड्रोकोर्टिसोन बनाम कोर्टिसोन रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
Corticosteroids र रक्सी सामान्यतया सँगै लिन सिफारिस छैन। नियमित रूपमा रक्सी पिउँदा रगतमा चिनीको मात्रा परिवर्तन गर्न सक्छ र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ। कोर्टिकोस्टेरोइड र रक्सीको दुष्प्रभाव ओभरल्याप हुन सक्छ र हानिकारक परिस्थितिमा निम्त्याउन सक्छ।
के हाइड्रोकोर्टिसोन एक कोर्टिकोस्टेरोइड हो?
हाइड्रोकार्टिसोन एक कृत्रिम कोर्टिकोस्टेरोइड हो। यसको प्रभाव प्राकृतिक रूप बाट उत्पादित ग्लुकोकोर्टिकॉइड, कोर्टिसोलको नक्कल गर्दछ। अन्य कोर्टिकोस्टेरोइडको तुलनामा हाइड्रोकार्टिसोनलाई कम क्षमता कर्टिकोस्टेरोइड मानिन्छ।
कोर्टिसोनले के गर्छ?
Cortisone एक विरोधी भड़काउने र प्रतिरोधक औषधि को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। यसले छालाका रोगहरू, फोक्सोको अवस्था, स्वत: प्रतिरक्षा विकारहरू, र संक्रमणबाट सूजनको उपचार गर्न सक्छ। Cortisone एलर्जी प्रतिक्रिया र गम्भीर दमा एपिसोडहरूको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाइँ prozac र cymbalta सँगै लिन सक्नुहुन्छ
के एक झूठी सकारात्मक कपाल follicle परीक्षण हुन सक्छ
प्राकृतिक उपचार छिटो रक्तचाप कम गर्न को लागी
खमीर संक्रमण कसरी यो बाट छुटकारा पाउन